China Steel wire ngcina tape Ukwenza kunye Factory | Jiashun
Ilaphu leglasi yefayibha lisetyenziswa njengezinto ezisisiseko, ezifakwe ngocingo lwentsimbi. Elinye ilaphu locingo lwentsimbi ligutyungelwe ngerabha yokutyabeka, i-polyurethane enamathela, i-graphite enamathela, i-vermiculite coating, njl.njl. Yenziwe ngelaphu lobushushu elinomlilo onganyangekiyo.
Ilaphu leglasi yefayibha lisetyenziswa njengezinto ezisisiseko, ezifakwe ngocingo lwentsimbi. Elinye ilaphu locingo lwentsimbi ligutyungelwe ngerabha yokutyabeka, i-polyurethane enamathela, i-graphite enamathela, i-vermiculite coating, njl.njl. Yenziwe ngelaphu lobushushu elinomlilo onganyangekiyo. Ezi zixhobo zenzelwe ukomeleza ilaphu elingenamlilo, okwenza ukuba likwazi ukumelana nomlilo, linganyangeki ziinyembezi, linxibe kwaye linqande umhlwa. Ngokwemeko yokusetyenziswa eyahlukeneyo, unokukhetha iglasi yefayibha eqinisiweyo yengubo yentsimbi ngaphandle kokutyabeka, okanye ungakhetha ilaphu locingo lwentsimbi ngokutyabeka, kwaye ezi anzhidun zinokuhlangabezana neemfuno zakho. Iglasi yefayibha ka-Anzhidun yenze intsimbi yentsimbi eyomeleleyo inezi zinto zilandelayo: ukumelana nomlilo kunye nokusebenza kobushushu. Nokumelana Good imichiza, nokumelana oyile kunye manzi. Ukumelana nokuguga, ukusebenza ngokugqwesileyo ngaphandle, ubomi ukuya kwiminyaka eli-10. Amandla High, okuhlatywa ukumelana, iinyembezi ukumelana. Ukugqwesa okugqwesileyo kwelangatye, ukukhawuleza kwelangatye. Akukho kucaphuka kolusu, akukho kubetha ngesandla.
Umsi wekhethini, ikhethini yomlilo, ingubo yomlilo, ingubo yokuwelda, ingubo yomlilo, ibhodi yomlilo, ingxowa yomlilo. Ulusu oluxubileyo oluhlangeneyo lolusu, ulwandiso ngokudibeneyo kunye nesinxephezeli. Ilaphu lokukhusela i-Thermal, izinto zokugquma nge-thermal zeshishini leziko. Ibhatyi yokugquma kunye nephedi yokugquma. Ngaphakathi nangaphandle ukutyabeka okuchasene nemibhobho yokugquma. Enye inkqubo yokugquma umlilo. Ibhanti yokuhambisa ubushushu obuphezulu
Into idlulile ngendlela yesiqinisekiso sikazwelonke esifanelekileyo kwaye samkelwa kakuhle kushishino lwethu oluphambili. Iqela lethu lobunjineli liya kuhlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana kunye nengxelo. Siyakwazi ukukuhambisa neesampulu ezingahlawulisi mali ukuhlangabezana neenkcukacha zakho. Imizamo efanelekileyo iya kuthi iveliswe ukuze ikunikeze ezona nkonzo ziluncedo kunye nezisombululo. Ukuba unomdla kwinkampani yethu kunye nezisombululo, nceda unxibelelane nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba kwangoko. Ukuze ukwazi ukwazi izisombululo zethu kunye neshishini. ngaphezulu, uya kuba nakho ukuza kumzi-mveliso wethu ukuwubona. Siya kuhlala sizamkela iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela ukuba siqiniseke. ukwakha ishishini. ulonwabo nathi. Nceda uzive ukhululekile ngokupheleleyo ukuba uthethe nathi ngombutho. Kwaye siyakholelwa ukuba siza kwabelana ngamava aphambili okurhweba nabathengisi bethu.
Egqithileyo Ilaphu leFluororubber
Okulandelayo: Isivalo somlilo